Ny kinova beta an'ny Fedora 34 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony | Avy amin'ny Linux
Ny kinova beta an'ny Fedora 34 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony
Andro maromaro lasa izay Navoaka i Fedora 34 Beta (ny kinova fijerena ny kinovan'ny Fedora manaraka) izay mampiasa GNOME 40 ho toy ny tontolon'ny biraonao tsy misy toerana ary izay manamarika ny hatsiaka ny fanovana rehetra izay hampidirina ao amin'ny kinova miorina.
Ny GNOME 40 dia miavaka amin'ny mpikirakira ny sehatr'asa marindrano izay mikendry ny hitondra ergonomika lehibe kokoa amin'ny tontolon'ny asa miorina amin'ny interface indrindra izay mifandray matetika amin'ny takelaka.
Inona no Vaovao ao amin'ny Beta Fedora 34?
Ny kinova Fedora vaovao mampiasa ny birao GNOME 40 vaovao, izay mitondra fanatsarana ny zava-niainan'ny mpampiasa Ho an'ny famaritana ankapobeny ny mpandika baiko GNOME, ny fanatsarana azy dia namerina nandamina ireo fiasa toa ny karoka, ny varavarankely, ny toeram-piasana ary ny rindranasa hahatonga azy ireo hifanaraka amin'ny habaka kokoa. GNOME 40 misy koa ny fanatsarana amin'ny fikirakirana fanaraha-maso marobe ary mamela ny mpampiasa hisafidy eo amin'ny sehatr'asa ihany amin'ny efijery lehibe na sehatr'asa amin'ny efijery rehetra.
Ho fanampin'izany, afaka mahita ny Btrfs ho toy ny rafitra fisie default izay nampidirina tao amin'ny Fedora 33 ary ho hita ao amin'ity kinova Fedora 34 Beta vaovao ity ary izany dia Btrfs dia miorina amin'ity asa ity amin'ny alàlan'ny famelana ny famatrarana mangarahara ho an'ny toerana malalaka fitehirizana. Natao hanampiana amin'ny fampitomboana bebe kokoa ny fiainan'ny haino aman-jery ity, satria ity famoretana ity dia ho zava-dehibe amin'ny fampitomboana ny vakiteny sy ny fanoratana ny fisie rakitra lehibe kokoa, miaraka amin'ny fahafaha-mampiditra tahiry fotoana lehibe amin'ny fivezivezena.
Inona ity Ny dikan'izany dia ny famoretana tsara kokoa amin'ny kapoakan'ny fanjakana mafy orina, izay tokony hampitombo ny fiainana fitehirizana. Satria voafetra ny androm-piainan'ny SSDs, ankasitrahana ny fanamorana ny famerana. Ny fanavaozana ny Btrfs dia tokony hanatsara ny hafainganam-pandehan'ny SSD.
Fiovana iray hafa aseho ny fampiharana PulseAudio dia soloin'i PipeWire mampifangaro sy mitantana ny onjam-peo, miaraka amin'ny latency ambany ho an'ny mpampiasa matihanina satria natao tsara kokoa hamaly ny filan'ny kaontenera sy ny fampiharana alefa amin'ny Flatpaks, io fanovana io dia manohana ny fitomboan'ny IT amin'ny tontolo misy container.
Ny famindrana mankany PipeWire dia mamorona toerana ho an'ny fotodrafitrasa tokana ihany koa afaka mihaona amin'ny tranga fampiasana audio manokana sy matihanina, miaraka amin'ny tanjona hamaranana ny fizarazaran'ilay tontolon'ny feo. Raha ny filazan'ireo tompon'andraikitra amin'ny tetikasa Fedora, ny tetikasa Fedora dia mikasa ny hanitatra ny traikefan'ny mpampiasa sy ny fananganana ireo fotodrafitrasa am-peo miaraka amina fampidirana tsara kokoa manerana ny rafitra.
Ary voalaza koa fa Ny Fedora 34 Beta dia manome traikefa tsara kokoa amin'ny toe-javatra tsianjery ambany (OOM) amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny systemd-oomd amin'ny alàlan'ny default. Ny hetsika ataon'ny systemd-oomd dia miasa eo amin'ny sehatry ny vondrona, mifanaraka tsara amin'ny tsimbinan'ny andiana systemd.
Amin'ny lafiny iray, endri-javatra iray hafa Ny endri-javatra mahaliana indrindra aseho dia ao amin'ny lozisialy Wayland stack dia ny fanohanana fampisehoana izay ahafahan'ny mpizara rahona mihodina birao izay azo idirana lavitra, amin'nyhafa noho izany, Nahazo fanohanana ihany koa i Wayland ho an'ny sary 3D haingam-pandeha amin'ny GPU Nvidia. ary koa nisy fanovana natao tamin'ny fisafidianana fivoriana misy toerana ao amin'ny SDDM mba hifidy ny session Desktop KDE Plasma Desktop any Wayland mihoatra ny an'ny X11.
Farany, ny Fedora 34 dia honohono fa manana fanohananana touchpad tsara kokoa, na dia aorin'izany aza ny takelaka mikasika dia tsy maintsy misy ny fanohanana ny famafana sy ny mitsivalana swipe amin'ny rantsantanana telo.
Farany, raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao Momba ny fanovana rehetra mifandraika amin'ity kinova beta an'ny Fedora 34 ity dia azonao atao ny manamarina ny antsipiriany rehetra amin'ny alàlan'ny mankamin'ity rohy manaraka ity.
Vantany vao ho an'ireo izay liana afaka misintona sy manandrana ny kinova beta, afaka mahazo ny sarin'ny rafitra avy ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny kinova beta an'ny Fedora 34 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony
RetroShare: sehatra fandefasana hafatra miafina